नेवारी जनजीवन : लकडाउन हुनु र नहुनु उस्तै !- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
असनमा मल्लकालीन सत्तल छ । उहिले ल्हासामा व्यापार गरेर फर्किनेहरुलाई यहीँ दुई सातासम्म राखेर मात्रै घर जान दिइन्थ्यो ।
जेष्ठ १३, २०७७ गणेश राई
काठमाडौँ — लकडाउन जारी भएयता लाखौं मानिसले काठमाडौं उपत्यका छाडिसकेका छन् । उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदाय भने शान्त तलाउझैं लकडाउनको दिनगन्ती गरिरहेका छन् । विज्ञका अनुसार राजधानीको सबैभन्दा बाक्लो र पुराना सहरको आवासीय संरचना वास्तुमैत्री भएकाले यी समुदाय संयम छन् ।
यत्तिका बाक्लो बस्तीका मान्छेमा उकुसमुकुस हुँदैन ?
इतिहास तथा संस्कृतिविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ भन्छन्, 'बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सहरी जनजीवन उकुसमुकुस देखिनु स्वाभाविकै हो, तर काठमाडौं उपत्यकामा जहाँ नेवार जातिको परम्परागत बस्ती छ, त्यहाँको घरको वास्तुकलाले जनजीवन घरआँगनभित्रै रहन मद्दत गरेको छ । उनीहरूलाई लकडाउन हुनु र नहुनुमा उस्तै हुन्छ ।’
उपत्यकामा नेवार जातिको परम्परागत बस्तीका घर एकापसमा जोडिएका छन् । बाहिरबाट लहरै जोडिएको देखिए पनि भित्र भने घरैघरको माझमा खुल्ला ठाउँ राखिएका छन् । चोक र बहालहरू छन् । कतिपय घरका पछाडि साना बगैंचा पनि छन् । मौसमअनुसार कृषकहरूले ती बहालमा धान सुकाउने गर्छन् । सामूहिक भोज चलाउँछन् । समाजमा ‘३६५ दिनमा नेवारको ३६६ जात्रा र पर्व’ भन्ने पनि गरिन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा डबली छन् । ती डबलीमा सुस्ताउने, रात्रिकालीन नाचगान र नाटक प्रदर्शन हुने गर्छन् । लकडाउनको बेला ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सहरका नागरिकहरू यिनै चोक, बहाल, सत्तलहरू आसपासमा समय व्यतित गर्ने गरेका छन् । अहिले भोज, जात्रा सबै बन्द छन् ।
इतिहासविद् श्रेष्ठका अनुसार १८औं शताब्दी अर्थात् नेपाल संवत् ७३६ मा नेपालमा ठूलो महामारी आएको थियो । काठमाडौं केन्द्रविन्दु रहेको त्यो महामारी ७ वर्षसम्म चल्यो । ‘त्यो महामारीले धेरै मान्छे मरेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन राजा भास्कर मल्ल अहिलेको हनुमानढोका तिनढोलमा अहिलेजस्तै सेल्फ क्वारेन्टाइन (आफैं घरबास) मा बसेका थिए । आत्मबल थाम्नै सकेनन् । अन्तमा दरबारमा आए र महामारीको चपेटामा परेर उनी मरे । त्यसले महामारीको बेला एकान्तवास कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने देखाउँछ ।’
त्यसैगरी भक्तपुरका राजा जगतप्रकाश मल्ललाई ३४ वर्षको उमेरमा बिफर रोग लागेको थियो । त्यो रोग अरुलाई नसरोस् भनेर सत्तलमा राखिएको इतिहासविद् श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन् । महामारीको बेला बाहिर निस्किनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । उतिखेर लामो समय चारधाम जाँदा मान्छेले आफ्नो जन्मकुण्डली चिना लिएर जान्थे । त्यो मान्छे फर्केर आउँदा बाँचेर आएकोमा हर्षोल्लास मनाउँथे । त्यसरी फर्केकालाई तत्कालै घर पस्न दिँदैनथे । सहरबाहिरै स्वागत गरेर सत्तलमा राख्ने गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
संस्कृतिविद् डा. चुन्दा बज्राचार्यका अनुसार बुद्धिस्ट नेवार समुदायको घरको बनोट नै विशेष प्रकारको हुन्छ । ‘परम्परागत घरको भुइँतलामा सामान राख्ने गोदाम, दोस्रो तलामा पाहुना राख्ने, तेस्रो तलामा परिवार सुत्ने, चौथो तलामा भान्सा तथा खाना खाने र पाचौं तलामा देवताको पूजाथान रहन्छ,’ काठमाडौंकै स्थानीय बज्राचार्यले भनिन्, ‘बाहिरबाट आउने मानिस जो कोही घरभित्र प्रवेश गर्नुअघि चोखो पानीले हातगोडा धुनुपर्ने परम्परा छ । हरेक दिन चोक र बहाल सफा गरिन्छ ।’ नेवार समुदायमा एउटै घरमा संयुक्त परिवार रहने परम्परा छ । केही वर्षदेखि एकल परिवार तथा एउटा घरको तलामा बस्ने चलन आएको छ । त्यसैगरी घर भाडामा दिने चलन बढेको बज्राचार्य बताउँछिन् ।
‘महामारी आए पनि अक्षता छर्ने, सफासुग्घर भएर बस्ने चलन कायम छ,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर कोही पनि जथाभावी निस्किएका छैनन् ।’
सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गरेपछि केही दिन स्थानीयलाई बुझाउन गाह्रो भएको काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का वडा सदस्य परिवेशमान बज्राचार्यले बताए । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल भाषामै ‘कोरोना भाइरस’बारे सन्देश प्रवाह गरे । उनले स्थानीय भाषामा ‘ल्वय् पुनिगु’ (रोग सार्ने) भनेर सम्बोधन गरे भने वडा कार्यालयहरूले टोल–टोलमा स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीलाई नेपालभाषामा माइकिङ गर्न लगाए । ‘महानगरले तरकारी किन्ने समय दिएको बेलामात्र घरका एकदुई सदस्य बाहिर निस्किनुहुन्छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘परिस्थितिअनुसार घरभित्रै बस्नुभएको छ । नेवारहरू परम्पराप्रति बढी विश्वास राख्छन् ।’
नेपाल भाषा दैनिकका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरका अनुसार नेवारहरू स्वभावगत बानी व्यवहारले धेरै घुमफिर गर्दैनन् । ‘अधिकांश व्यापारी भएकाले र घरहरू एकआपसमा जोडिएकाले आपसी कुराकानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘अपरिचित मान्छेसँग सम्पर्क गर्दैनन् । चोक, बहालभित्र सुरक्षित छन् ।’
इतिहासविद् श्रेष्ठको भनाइमा कोराना भाइरस अस्थायी हो । ‘हामी कोरोना युगमा बाँचिरहेका छौं, प्राकृतिक सन्तुलन भएपछि चाँडै छाडेर जान्छ,’ उनले भने, ‘तर यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक असरहरू छाडेर जान्छ । हरेक महामारीको इतिहास हेर्दा महामारी र दुर्भिक्ष (अनिकाल) सँगसँगै आउने गरेको पाइन्छ । अनिकालमा बिउ जोगाउनु, महामारी जिउ जोगाउनु त्यसै भनेको होइन ।’ सहरमा आउने संकटलाई सरकारले विशेष ख्याल गर्न पनि उनले सुझाए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेवार जातिको जनसंख्या १३ लाख २२ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौं उपत्यकामा रहेको नेवाः देय दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार बताउँछन् । ‘उपत्यकाका आदिवासी नेवारको विशिष्ट मौलिक पहिचान छ,’ उनले भने, ‘सहरीकरणको चाप परेर जग्गाजमिन नभएका र आर्थिक रूपमा पहुँच नभएका पनि उत्तिकै छन् ।’
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेलगत्तै १८ नगरपालिका र महानगरपालिकाको छाता संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरम, काठमाडौंले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाविरुद्ध लड्न आह्वान गरेको छ । घर बाहिर नजाने, समूहमा गफ गर्न नजाने भनेर उर्दी जारी गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनलगायत ऐतिहासिक सहरका समुदाय बाहिर निस्किएका छैनन् ।
मल्लकालीन क्वारेन्टाइन सत्तल
काठमाडौंको असनस्थित अन्नपूर्ण मन्दिरसँगै दक्षिणतर्फ एक सत्तल छ । त्यसलाई ‘यिताचपाः’ चिनिन्छ । यो सत्तल मल्लकालीन सम्पदाका रूपमा लिइन्छ । गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको यस भवनको भुइँतलामा पसल र माथिल्लो तला ‘अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजन खलः’ रहेको छ ।
उहिले काठमाडौंका तुलाधर, बज्राचार्य, शाक्य र धाख्वाले ल्हासाको व्यापार गर्थे । श्रेष्ठले कुतीसम्म व्यापार गर्थे । ती व्यापारीलाई आवातजावत गर्न धेरै महिना र वर्षौं लाग्थ्यो । काठमाडौं फर्केपछि उनीहरुलाई यही सत्तलमा दुई साता बस्न लगाइन्थ्यो ।
‘अहिले हामी कोरोना लागेकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेजस्तै त्यही सत्तलमा बसाइन्थ्यो,’ असनका स्थानीय व्यापारिक घरानाका सदस्य दीपक तुलाधर भन्छन्, ‘हाम्रा पुर्खाहरू जोजो ल्हासाबाट फर्किन्थे सत्तलमा दुई हप्ता बसेरमात्र घर प्रवेश गराइन्थ्यो ।’ सन् १९५९ देखि ल्हासा व्यापार टुटेको उनले जनाए । 'हाम्रै समयमा पनि उपत्यकाबाहिर घुमेर आएपछि ‘खालु’ (तितो जडिबुटी) पानीमा डुबाएर रस खुवाइन्थ्यो,’ उनी सम्झिन्छन् ।
इतिहासविद् मोतीलक्ष्मी शाक्यका अनुसार ल्हासाबाट फर्किनहरूको शरीर सुन्निएको हुनथ्यो । त्यसलाई पानीरोग भनिन्थ्यो । ल्हासाबाट फर्किएका व्यापारीलाई सत्तलमै उपचार गराइन्थ्यो । यहाँको हावापानीमा घुलमिल गर्न सक्ने भएपछि मात्र घर फर्किन दिइन्थ्यो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ २१:२५
लोकमार्ग बने एक दिनमा जिल्ला सदरमुकाम, सेनाले खन्ने गोरेटोबाट तीन दिन
महाकाली लोकमार्ग निर्माण भए दार्चुलाका माथिल्ला क्षेत्रहरु तिंकर, छाङरु, गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुराका बासिन्दा नेपालकै भूमि हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलंगासम्म आउन पाउनेछन् ।
जेष्ठ १३, २०७७ जगदीश्वर पाण्डे, मनोज बडू
काठमाडौँ,दार्चुला — २०४५ सालसम्म नेपालका अन्य जिल्लाबाट दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो बाध्यता छैन । नेपालकै सडक मार्ग हुँदै सिधै खलंगा पुग्न सकिन्छ । लामो समयमा भएको दार्चुलाको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यसलाई मान्न सकिन्छ ।
तर, खलंगाबाट दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा पुग्न भने अहिले पनि भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई अहिलेसम्म पनि नआएको परिवर्तन मान्न सकिन्छ ।
खलंगाबाट जिल्लाकै माथिल्ला क्षेत्रहरु ब्यास गाउँपालिकाका छाङरु, तिंकर, गुन्जी, कापालानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि खलंगाबाट केही माथि गएपछि सीमा नदी महाकाली तर्नुपर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग पास लिएर भारतीय भूमि हुँदै माथिल्लो भागमा पुगेर फेरि आफ्नो क्षेत्रमा आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
दार्चुलाका माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दा जाडोका कारण वर्षको ५ महिना त्यहाँ बस्न सक्दैनन् । त्यसैले वर्षमा दुईपटक तल र माथि गर्नुपर्ने उनीहरुको प्राकृतिक बाध्यता छ । 'आफ्नै मुलुकको बाटो भएर हिँड्न पाए हुन्थ्यो । कति अर्काको मुलुकको बाटो हुँदै ओहोरदोहोर गर्नु,' तिंकर गाँउका दानसिंह तिनकरी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले महाकाली लोकमार्ग छिटो निर्माण गरिदिए आफ्नै मुलुकको भूमि भएर हिँड्न पाउँथ्यौं ।’ दार्चुलाका माथिल्ला क्षेत्रहरु तिंकर, छाङरु, गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुराका स्थानीय बासिन्दा महाकाली लोकमार्ग निर्माण भए आफ्नै भूमि भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आउन पाउने आसमा छन् ।
सरकारले २०६५ सालमा महाकाली लोकमार्गको दार्चुला–तिंकर सडक खण्ड निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि त्यसलाई महत्व दिएन । १ सय ३४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त लोकमार्ग चीनको सीमानजिक तिंकर भञ्जाङसम्म पुग्छ । लोकमार्गको अहिलेसम्म ४० किलोमिटरमात्र ट्रयाक खोलिएको छ । ‘हामीले उक्त लोकमार्ग निर्माणको विषयमा पटकपटक संसद्‌मा ध्यानाकर्षण गरायौं र सम्बन्धित निकायहरुलाई घचघच्याइरहेका छौं,’ दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘तर, कसैले पनि सुनेनन् । कानमा तेल हालेर बसिरहे । अहिले आएर बल्ल त्यो स्थानको महत्व सबैलाई थाहा भयो ।’
बडूले गत आर्थिक वर्षमा आफूले पटकपटक उक्त सडकखण्डका विषयमा कुरा उठाउँदा पनि सरकारले उक्त सडक निर्माणका लागि रकम विनियोजन नगरेको बताए । ‘यसले गर्दा बल्लबल्ल सुरुआत भएको सडक पनि रोकियो,’ उनी भन्छन् ।
अहिले खलंगादेखि ४० किलोमिटर दुरीमा रहेको ब्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरासम्म खाद्यान्न ढुवानीका लागि ट्रयाक्टर चल्छन् । कहिलेकाहीँ समस्यामा परेका बिरामी बोक्न जोखिम मोलेरै भए पनि जिपहरु आंशिक रुपमा चलेका छन् ।
जोखिम मोलेर गाडी चढेपछि खलंगाबाट साढे ३ घन्टामा सुन्सेरा पुगिन्छ । त्यहाँबाट ५ घन्टा हिँडेपछि ब्यास गाउँपालिका-२ को दुम्लिङ । सुन्सेरादेखि त्यहाँसम्मको दुरी १५ किलोमिटर हो । अहिलेको अवस्थामा दुम्लिङबाट सिधै छाङरु जानुपर्ने हुन्छ । यात्राको दौरान बीचबाटोमा खानेबस्ने व्यवस्था नहुँदा बास बस्न मिल्दैन । हिँड्नलाई सहज बाटो भए १२/१३ घन्टा हिँड्नुपर्छ । दुम्लिङबाट घाँटीबगर १५ किलोमिटरको दुरीमा छ । घाँटीबगरबाट कुन्तीसाउ ९ किलोमिटर र कुन्तीसाउबाट छाङरु ५ किलोमिटरमा छ । छाङरुदेखि तिंकर १२ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । तिंकरबाट दुङ्काङ ८ किलोमिटर र दुङ्गाङबाट तिंकर भञ्ज्याङ १७ किलोमिटरमा छ ।
अहिले भारतको बाटो हुँदै खलंगाबाट तिंकर भञ्ज्याङ पुग्न २ दिन लाग्छ । भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलाबाट सिधै कालापानीसम्म गाडी चल्ने गरी सडक निर्माण भएको छ । धार्चुलाबाट सिधै सुरक्षाकर्मीका गाडीहरु जाने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक सवारी भने माल्पासम्म चल्छन् । माल्पाबाट माथिल्लो क्षेत्र जान हिँड्नुपर्छ । भारततर्फ सडक भएको र सवारीसाधन चल्ने कारणले गर्दा यात्रा गर्न सहज छ । नेपालतर्फको बाटोबाट हिँडेर छाङरु पुग्न अहिले पनि ४ दिन लाग्छ । ४ दिन लाग्ने गोरेटो बाटो पनि कठिन छ । बीचमा बास बस्न सजिला ठाउँहरु पनि छैनन् ।
सेनाले थालेको गोरेटो
गत साताबाट नेपाली सेनाले असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी घाँटीबगर इलाकाको गोरेटो बाटो बनाइरहेको छ । उक्त क्षेत्रको करिब ४ सय ५० मिटर कडा चट्टान फुटाउने र पहिरो पन्छाउने काम गरेपछि पैदल बाटो केही छोटिन्छ । ४ दिन लाग्ने बाटो ३ दिनमा झर्छ । यसको सट्टा महाकाली लोकमार्गको निर्माण हुने हो भने सडकबाट निकै छिटो पुगिने स्थानीयहरु बताउँछन् ।
‘महाकाली लोकमार्ग निर्माण भएपछि खलंगाबाट एकै दिनमा तल आउन र माथि जान सकिन्छ,’ तिंकरीले भने, ‘भारतीय बाटोको प्रयोग आवश्यक हुन्न ।’
दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोला घाँटीबगर इलाकाको गोरेटो बाटो बनेपछि खलंगाबाट तिंकर भञ्ज्याङ पुग्न पैदल ६ दिन लाग्ने बताउँछन् । ‘सडक बनेपछि भने एकै दिनमा तिंकर भञ्ज्याङ पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरु र तिंकर गाउँमा बस्ने स्थानीय ब्यासी शौका समुदाय चिसोका कारण ६ महिना सदरमुकाम खलंगा बस्छन् । न्यानोका ६ महिना ब्यास क्षेत्रमा आफ्ना पशु–चौपाया र लालाबाला लगेर जाने गरेका छन् । परम्परादेखि नै यो समुदायका मानिसहरु बर्सेनि भारत–नेपाल–चीन व्यापार गर्दै आएका छन् ।
पञ्चायतदेखि नै छाङरुमा प्रहरी चौकी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको ब्यास पोस्ट, छोटी भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय रहेका छन् । ब्यास गाउँपालिकाको वडा–१ कार्यालयमा पनि छाङरुमै रहेको छ । अहिले छाङरुमा वर्षका न्यानो ६ महिनामात्र वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी, अपीनाम्पाको पोस्ट र स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा हुन्छन् । यो वर्ष ती सरकारी कार्यालयमध्ये प्रहरी चौकीमात्र ब्यासमा पुगेको छ । अन्य सरकारी कार्यालय बाटो नहुँदा माथि जान सकेका छैनन् ।
जेठ ३१ गते छाङरुमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना भएको छ । सशस्त्र प्रहरीलेको बीओपी छाङरुको गागामा छ । ब्यासका स्थानीयले छाङरुबाट करिब ८ किलोमिटर पर कौवा क्षेत्रमा बीओपी राखे कालापानी क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीको गतिविधि निगरानी गरिने सुझाव दिएका छन् ।
भारतले आफ्नो भूमि कब्जा गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । अब त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक उपस्थिति जनाउने सरकारी योजना छ । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अहिलेको लागि सडक पूर्वाधार हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते खलंगादेखि घाँटीबगर ६५ किलोमिटर सडक विभागलाई र घाँटीबगर–तिंकर भञ्ज्याङ ८७ किलोमिटर नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सांसद बडू अब महाकाली लोकमार्गलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘खलंगाबाट तिंकर भञ्ज्याङसम्म जाने सडक भयो भने त्यो क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति हुन्छ । त्यहाँका नेपाली जनताले पनि सरकार छ भन्ने अनुभव गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसद बडूले जोड दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ २१:००